Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: प्रधानमन्त्री भट्टराईको यो नयाँ अभिब्यक्ती अहिलेनै किन आयो ? : अब 'जिवन्त तथा गतिशिल पुल' को रुपमा भारत र चीनबीच रहेनौं भने दुई देश मध्ये एकमा 'मर्ज' हुन सक्ने खतरा बढ्छ,' प्रधानमन्त्री भट्टराई
प्रधानमन्त्री भट्टराईको यो नयाँ अभिब्यक्ती अहिलेनै किन आयो ? : अब 'जिवन्त तथा गतिशिल पुल' को रुपमा भारत र चीनबीच रहेनौं भने दुई देश मध्ये एकमा 'मर्ज' हुन सक्ने खतरा बढ्छ,' प्रधानमन्त्री भट्टराई
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सबै राजनीतिक दलहरुले एउटै राष्ट्रिय सोच विकास गरी परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ रुपमा परिभाषीत गर्नु पर्ने बताएका छन्। भट्टराईले कल्पना गरेको नयाँ परराष्ट्र नीतिमा नेपाल 'दुई ढुङ्गा बीचको तरुल' नभई भारत र चीनबीच 'जिवन्त तथा गतिशिल पुल' (भाइब्रेन्ट एण्ड डाईनामिक) को रुपमा रहने छ। नयाँ नीतिलाई कार्यन्वयनमा ल्याउन दुई वटा संस्था स्थापना गर्नु पर्ने सोच उनको छ। 'नेपालको परराष्ट्र नीति सही ढङ्गले परिभाषि हुन सकेको छैन,' चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओले नेपालको एकदिने भ्रमण सम्पन्न गरी फर्केको भोलिपल्ट आइतबार आफ्नै निवास बालुवाटारमा केही सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री भटट्राईले भने, 'परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरी
विश्वसामु लैजानु पर्छ। यसको लागि सबै दलले एउटै राष्ट्रिय सोच बनाउनु पर्छ।' भट्टराईको बुझाइमा परराष्ट्र, अर्थ र आन्तरिक सुरक्षा राज्यका सबैभन्दा महत्वपूर्ण तीन नीति हुन्। संसार अन्तरसम्बन्धीत भएकोले अर्थतन्त्र र परराष्ट्र नीति पनि अन्तरसम्बन्धीत रहने उनले बताए। अर्थ र परराष्ट्र नीतिलाई सँगसँगै बढाउन सकेमात्र राष्ट्रले विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्ने धारणा उनको छ। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई सफल बनाउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आँफु अनुकुल बनाउनु पर्ने उनले बताए। नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पृथ्वीनारायण शाहको ठूलो योगदान रहेको बताउँदै उनले अहिले पनि उनकै दिव्यउपदेश वरीपरी परराष्ट्र नीति घुमेको जनाए। सामन्ती युगमा सिमा विस्तार गर्ने होडमा विश्व लागेकाबेला 'दुई ढुङ्गा बीचको तरुल' सही भएपनि अहिले भने देशलाई दुई तिरबाट चेपेर राख्न नहुने तर्क भट्टराईको छ। सन् १९६० को दशकबाट नयाँ विश्व परिस्थीति सृजना भएकोले अब देशको परराष्ट्र नीति 'जिवन्त तथा गतिशिल पुल' को रुपमा व्याख्या गरिनु पर्ने उनले बताए।
'नयाँ विश्व परिस्थिति अनुसार हाम्रो परराष्ट्र नीति ठिक भएन। अब 'जिवन्त तथा गतिशिल पुल' को रुपमा भारत र चीनबीच रहेनौं भने दुई देश मध्ये एकमा 'मर्ज' हुन सक्ने खतरा बढ्छ,' प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, 'यसको लागि दुई ठूला छिमेकीबाट फाइदा लिन हाम्रो राजनीतिक अवस्था स्थिर र सशक्त बनाउनु पर्छ।'
भारतीय नेताहरुसँग यसअघि नै प्रयोग गरेको 'जिवन्त तथा गतिशिल पुल' शब्दाली शनिबार चिनियाँ प्रधानमन्त्री जियावाओसँगको द्विपक्षिय वार्तामा पनि प्रयोग गरेको उनले बताए। भट्टराईका अनुसार जियावाओले उक्त शब्दावली नोट गरी दिवाभोजलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अलिकती भारतका विषयमा बोल्छु भन्दै भनेका थिए 'दुई देशबीचको सम्बन्ध सन्तुलन राख्नुपर्छ। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नोस्।' जियावाओले शब्दावलीमा रुची देखाएर नेपालको भूमिका चीनले नयाँ ढङ्गले हेर्न चाहेको सन्देश दिएको बुझाई भट्टराईको छ।
युग अनुसारको नीति परिवर्तन गरेर मात्र नेपालले सम्मान हासिल गर्न सक्ने उनले बताए। परराष्ट्र नीतिलाई 'पृथ्वीनारायण शाहका आँखा' ले हेर्ने कि फरक ढङ्गले हेर्ने बहस गर्ने बेला भएको ठहर उनको छ। भौगोलिक अवस्था, व्यापार, संस्कृती, आवतजावतका दृष्टिले भारतसँग निकता बढि रहने उनले बताए। 'विस्तारै दुवैपक्षसँग सन्तुलन मिलाउनु पर्छ,' भट्टराईले भने।
कुनै पनि देशसँग आर्थिक सम्बन्ध नराखेसम्म अन्य सम्बन्धले मात्र राष्ट्रको हित गर्न नसक्ने ठम्याई उनको छ। भारतसँग बिपा सम्झौता गर्नुको कारण उनले यसैलाई बताए। चीनसँग पनि बिपा सम्झौता गर्न 'ड्राफ्ट' मा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। दस्तावेज पुरा गर्न नसकेकै कारण जियावाओको भ्रमणमा शनिबार हस्ताक्षर हुने नसेको उनले बताए।
'आर्थिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन बिपा सम्झौता गरिएको हो,' भट्टराईले भने, 'भारत र चीन दुवैसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ।'
युग सुहाउँदो परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्र मामला तथा रणनीतिक अध्ययन प्रतिष्ठान र विकास तथा आर्थिक अध्ययन प्रतिष्ठान गरी दुई वटा संस्था आवश्यक पर्ने भट्टराईले बताए। यि दुवैमा संस्था स्वतन्त्र 'थिङ्क ट्याङ्क' का रुपमा रहने उनको सोच छ। संस्थाले दुई देश बिचको सम्बन्ध, विकास नीति, प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्ने उनले जनाए।
'यि दुई वटा संस्था स्थापना गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो सपना छ,' भट्टराईले भने। पञ्चायतका बेला सेडा, सिनासको स्थापना गरी केही गर्ने प्रयास भएपनि हाल यि संस्थाबाट प्रतिफल राष्ट्रले लिन नसकेको बुझाई उनको थियो।
शक्ति तथा विकास दक्षिणपूर्वि र दक्षिण एसियामा केन्द्रित हुँदै गएको र नेपाल यि दुवैको बिचमा पर्ने हुनाले धेरै फाईदा लिन सकिने उनले बताए। चीनको व्यापार पनि पूर्वबाट दक्षिण तर्फ बढेको बुझाई उनको छ। चीन र भारत एक आपसमा सम्बन्ध बढाउन चाहेकोले नेपाल 'भौतिक पुल' बन्नुपर्ने उनले बताए। यसको लागि तिब्बत, नेपाल र भारत जोड्ने गरी सडक तथा रेलसेवा सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने उनले जनाए।
'किमाथाङका, हुम्ला र जुम्ला गरी तीन ठाउँबाट सडक तथा रेल सेवा विस्तार गरी भारतसिमा सम्म जोड्न सकियो भने नेपाल साच्चै 'जिवन्त तथा गतिशिल पुल' बन्न सक्छ,' भट्टराईले योजना सुनाए, 'त्यसपछि मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा गरी भारत र चीनका लगानीकर्तालाई नेपाल भित्राउन सकिन्छ।'
लुम्बीनी, भैरहवा, विरगंज, नेपालगन्ज आसपासमा 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' घोषणा गर्न सके दुई देशका लगानीकर्ताका नेपाल 'ट्रान्जिट पोइन्ट' बन्ने उनले बताए। यस्तो भयो भने नेपालको जलविद्युतमा चीनले लगानी गर्ने र त्यसलाई भारतमा बेच्न सकिने छ।
सबै काम गर्दा जसरी भारत र चीनलाई विश्वासमा लिन आवश्यक छ ठिक त्यसैगरी अमेरिकालाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे। भारतमा धेरै अमेरिकी लगानीकर्ता रहेको र नेपालमा लगानी गर्न पनि उनीहरुनै आउने हुँदा अमेरिकालाई बिर्सन नहुने ठम्याई उनको छ। 'भारत, चीन र अमेरिका हाम्रा महन्तवपूर्ण सम्बन्ध रहेका मुख्य देश हुन्। यीनलाई विश्वासमा लिएर नै हामी अघि बढ्नु पर्छ,' उनले भने।
चिन भनेकै भारत विरोधी र भारत भनेकै चीन विरोधी भन्ने धेरैमा गलत बुझाई रहेको उनले बताए। दुवै देशका नेतासंग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध रहेको विश्वास उनले व्यक्त गरे। वीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि भारतीय नेतासँग सिधा आफ्नो कुरा राख्न सक्ने वर्तमान नेतामा आँफु पहिलो नम्बरमा पर्ने दाबी उनले गरे। भारतीय नेतासँग व्यत्तिगत सम्बन्ध भएकोले राजनीतिक तहका कुरा गर्न आँफुलाई सहज हुने उनले बताए।
'राजनीतिक रुपमा चिनियाँ नेताले अहिले लिएको नीति मसँग मिल्छ,' भट्टराईले भने, 'यसकारण चीनसँग पनि म निकट छु र उनीहरु पनि मलाई निकट महसुश गर्छन्।' जियावाओ आफ्नो कार्यकालमा नेपाल आएर आँफुले लिएको राजनीतिक धार तथा विचारप्रति चीनले समर्थन गरेको राजनीतिक सन्देश दिन खोजेको विश्वास भट्टराईको छ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ समकक्षी वेन जियाबाओको नेपाल भ्रमण चीनको अनुरोधमै गोप्य राखिएको बताएका छन्। नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीले सुरक्षामा पार्नसक्ने सम्भावित खतरालाई ध्यानमा राखेर जियाबाओ नेपाल आइपुग्नु ४५ मिनेटअघि मात्र भ्रमणको औपचारिक घोषणा गरिएको उनले उल्लेख गरे।
'चिनियाँ पक्षबाट भ्रमणबारे जानकारी ढिला गरौं भन्ने सुझाव आएपछि हामीले भ्रमणको दिन बिहान मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएका थियौं,' प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, 'कालचक्रका कारण ठूलो संख्यामा तिब्बती शरणार्थीले नेपाल-भारत आवतजावत गरेकाले जियाबाओको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई भ्रमणको जानकारी ढिला सार्वजनिक गरेका हौं।' भारतको बोधगयामा डिसेम्बर ३१ देखि जनवरी १० सम्म तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाले कालचक्र पूजा गरेका थिए।
Posted by www.Nepalmother.com at 7:28 AM